ဒီလိုမျိုးလေးတွေလဲရှိတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဒီလိုမျိုးလေးတွေလဲရှိတယ်
Posted by myanmarcitizen on Nov 7, 2012 in Myanma News | 20 comments
နယ်မှအမေလာတော့ ဒီနှစ်(2012) ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ကလေးတွေရဲ့ အောင်လက်မှတ်လျောက်ထားတဲ့ ဖြတ်ပိုင်းလေး ၅ခုပါလာပါတယ်။ နယ်ဘက်က ကလေးတွေကကိုယ်တိုင်ဘယ်လာထုတ်နိုင်မလဲလေ ရန်ကုန်ကိုတစ်ခေါက်လာဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာ။ ကားခက အသွားအပြန်ကို ၂၅၀၀၀ လောက်ကုန်မယ်။ ရန်ကုန်မှာနေစာရိတ်စားစရိတ်နဲ့ဆို ၅၀၀၀၀ လောက်ပါသွားမှအဆင်ပြေတာမျိုး ဆိုတော့ ရန်ကုန်ကိုသွားတဲ့လူကြုံကိုပဲအကူအညီတောင်းကြရတာပါ။
အမေသွားထုတ်တော့ အကုန်မရဘူး တစ်ရက်ကို(လူတစ်ယောက်တစ်စောင်ပဲထုတ်လို့ရမယ်လို့) ပြောတယ်ဆိုပြီး အောင်လက်မှတ် တစ်စောင်ပဲရလာခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်သိပ်မယုံချင်ဘူး ဒီကိစ္စဒီလောက်တောင် ခက်လားပေါ့။ ကျွန်တော်ကလဲလက်တွေ့သမားဆိုတော့ ပေးကျန်တဲ့လေးစောင်ကိုယူပြီးဒီနေ့မနက်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲရှိရာ ကိုသွားခဲ့လိုက်တယ်။ အိမ်က မေခဆောင် မှာထုတ်ရတယ်ပြောလို့ မေခဆောင် ကိုတန်းသွားခဲ့တယ်။ မေခဆောင် ရောက်တော့ အရင်ဆုံး ဟိုဟိုဒီဒီစာကပ်ထားတာတွေ လျောက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ဟုတ်ပါတယ် တကယ်ကိုစာရေးထားတာပါ (လူတစ်ဦးကို တစ်စောင်သာထုတ်ပေးမယ် ဆိုပြီးကပ်ထားပါတယ်)။
ကျွန်တော်စာရေးမလေးကိုမေးကြည့်ပါသေးတယ် နယ်ကလာတာ လေးယောက်ထုတ်ဖို့ပါလာတယ် ဒါဆိုကျွန်တော်က ရန်ကုန်မှာ လေးရက်ကြာနေရမယ့်ကိန်းဖြစ်နေပြီ ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုအဆင်မပြေ အောင်လုပ်တဲ့ rules ကကောင်းသလားမေးတော့။ စာရေးမလေးက အကို ငါးရက်ရန်ကုန်မှာမနေချင်ရင် မှတ်ပုံတင်ရှိတဲ့နောက် လူလေးယောက်ခေါ်လာပြီးထုတ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လဲစဉ်းစားမိတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာက ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးကန့်သတ်ထားရတာလဲ။ လျောက်ထားပြီးတစ်လကြာမှ ရတဲ့ Certificate လေးတစ်ခုအတွက်ဒီလိုအချိန်တွေပေးနေရတာဖြစ်သင့်လား။ ထုတ်တဲ့လူများလို့ဒီလိုလုပ်ထားလား ဆိုတော့လဲ လာထုတ်တဲ့လူဟာ ၁၅ ယောက်ထက်မပိုပါဘူး စာရေးမလေးတွေလဲ အလုပ်ရှုတ်နေတဲ့ပုံလုံးဝမပေါက်ပါဘူး။
ဒီမိုကလေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ပြည်သူတွေအဆင်ပြေမဲ့နည်းလမ်းကို လုပ်ပေးကြရမှာကို ဒီလိုခက်ခဲအောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်လဲ တော်တော်လေးကိုခံပြင်းဒေါသထွက်မိပါတယ်။ ဘာမှအရာမရောက်တဲ့စည်းကမ်းတွေလုပ်ထားလို့ အကျိုးမထူးတဲ့အပြင် အကျိုးယုတ်စေပါတယ်။ ဒီ Certificate လေးတစ်စောင်ထုတ်ဖို့ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ရေးရပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူလိုပါတယ် (ကျောင်းသား၊ ကိုယ်စားလှယ် နှစ်စောင်)။ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ပေးရတာကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကဘာလုပ် ဖို့ထပ်တောင်နေသေးတာလဲ (A4 စာရွက်နဲ့ရေးရတော့ စာရွက်မပါရင် ၁၀၀ နဲ့စာရေးမဆီမှာဝယ်ရပါသေးတယ်)။ လျောက်လွှာလာတင်တုန်းကသူတို့ပေးထားတဲ့ လက်ခံလေးနဲ့ ကျောင်းသားရဲ့ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူပါရင် ရလောက်ပြီလို့သုံးသပ်မိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်ဟာ နောက်တစ်ရက်မှာတော့ အိမ်ရှိလူကုန် အကုန်ခေါ်ပြီး ကျန် ၃ ဆောင်ကိုထုတ်ခဲ့ရပါတော့လေသတည်း။
၃. သောက်တလွဲ စည်းကမ်း
၆. လေးစားပါတယ် reuse လုပ်လို့ (ပုံ ၅ ရဲ့နောက်ကျောဘက်)
7. ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ဆိုပဲ
ကျနော် စဉ်းစားမိလိုက်တာ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်ဗျ ..
ဒီလိုမျိုး နယ်က လူတွေအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရန်ကုန်မှာ နေတဲ့ လူတွေ အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ ..
လွယ်လင့်တကူ လျှောက်ထား ထုတ်ယူလို့ ရအောင်
ဒါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဆောက်ထားလိုက်ရင် ပိုပြီး ကောင်းလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် …
စောစောစီးစီးရောက်လာပြီး မန့်သွားလို့ကျေးဇူးပါဗျာ။ ဘယ်ထဲမှာလဲမသိဘူး (အင်တာနက်ဂျာနယ်လား၊ သတင်းစာလား) ၀ံဂျီးဌာနတွေအားလုံး ၀က်ဆိုက် ရှိရမယ်ဆိုလား ဘာလား :-)
ခုထိ သမ္မတရုံး ဆိုက်လောက်ကလွဲပြီး
ကျန်တဲ့ ဟာတွေ ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း
ဘာမှ ဟုတ်မယ် မထင်ပါဘူး …
ဝက်ဘ်ဆိုက် ရှိတယ် ဆိုရုံပဲ တင်ထားကြတာ နေမှာပါ ..
တကယ်လို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဟုတ်အောင် လုပ်လိုက်ရင်လည်း
စားပေါက်က ပိတ်သွားမှာ စိုးနေကြတယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ …..
ဒါဆို နယ်မှာရှိနေတဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာဌာနတွေကို လွဲခိုင်းလည်းရတာဘဲ။
လွယ်တာကို ခက်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမတော့ PhD ပေးရမယ်။
အဲဒါပဲလေ လွယ်နေတာကိုခက်အောင်လုပ်မယ် ရှင်းနေတာကိုရှုပ်အောင်လုပ်မယ်
မရှိတာကိုရှိချင်ယောင်ဆောင်မယ် မရစ်ရရင်မနေနိုင် အဲဒါကိုကသူတို့အလုပ်
ကိုယ့်ဆရာရယ်….. ဒါများ အိမ်ကလူ3ယောက်နောက်ထပ် ခေါ်ပြီးသွားရတယ်လို့…အဲ့နားမှာ လုပ်စားနေတဲ့ အဖွဲ့လေးတွေရှိတယ်လေဗျာ ….. သူတို့က တစ်ယောက်စာထုတ်ပေးမှ 1000 ပဲပေးရတာရယ်…. ကိုယ့်ဆရာ အိမ်ကလူခေါ်သွားတော့ ပြန်တွက်ကြည့်ရင် အဲ့ဒိကိုရောက်ဖို့ ကားစီးတာက အသွား / အပြန် တစ်ယောက် 400 ဆိုတော့ 3ယောက် 1200၊ နောက်ထပ် သံလမ်းမှက်တိုင်ကနေ မေခကိုရောက်ဖို့ခ ဆိုက်ကားစီးရင် အသွားအပြန် တစ်ယောက် 600 ဆိုတော့ ၃ ယောက် 1800၊ ပေါင်း 3000 ကျနေပြီဗျ။ အဲ့ဒိက အဖွဲ့လေးတွေကိုလုပ်ခိုင်းလိုက်ရင် တစ်ရက်တည်းနြဲ့ပီးသွားတာကို။
( မကောင်းတာကို အားပေးတာမဟုတ်ပေမဲ့ အချိန်နဲ့ ကုန်ရမဲ့ငွေကို ကိုယ်ချင်းစာပြီး ပြောလိုက်တာပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေကို ကိုယ်သိနေတာပဲ… ဘာမှမပြောချင်တော့ပါဘူး)
အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့ သူမရှိဘူးဗျ (ကျွန်တော်သွားတဲ့နေ့ကပေါ့) သူ့မူက လူတစ်ယောက်(မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနဲ့) တစ်ရက်ကို တစ်စောင်ပဲထုတ်ခွင့်ရှိတာဆိုတော့ ပွဲစားလဲတွက်ချေမကိုက်လို့ထင်ပါတယ် ။ တကယ်တော့ အဲ့နေ့ကပဲ MICT ကသူငယ်ချင်းတွေခေါ်ပြီး ထုတ်ဖို့စိတ်ကူးလိုက်သေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို ဒုက္ခမပေးချင်တာကတစ် ကြောင်း နောင်ပြီး တန်ဖိုးထက်လက်ခကြီးမှာကိုကြောက်တာ နဲ့စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါကြောင်း :-)
ရှိတာကို ကိုယ့်ဆရာမသိလို့ပါ…. ကျွန်တော်က မေခ ဆောင်ရဲ့ ကိုက် 150 အတွင်းနားမှာနေလာတာ 34 နှစ်ရှိပြီဖြစ်လို့ ဒါတွေကို သိနေ မြင်နေတာပါ…..ဒါပေသိ ပြီးတာလည်း ပြီးပြီမို့…….
ဒီလိုမှန်းသိလာတောင်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။ နီးနီးနားနားဟာကို :-)
အာ….လာမခေါ်နဲ့ဗျ …… လာခေါ်ရင် ဘီအီးဖိုးက 1000 မကသွားမယ်ဆိုတော့ကား ………..
ကိုယ့်ရွာသား အချင်းချင်းကို စောဂထဲက အကျန်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး..
နာလဲ ဘီအီးဘိုး တစ်ထောင်မစိရင် ကိုယ်စားလှယ် သွားလုပ်ဦးမယ်
ဒါပေမဲ့လဲ ဆက်ပြောရရင်နိုင်ငံရေးတွေပါကုန်မယ် တခြားအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေရှိရင် ဘယ်သူက ဒီလို မတောက်တခေါက် ပွဲစားလုပ်ချင်မှာလဲ…
အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေနေနဲ့လဲ သိက္ခာရှိတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘ၀တစ်ခု ခိုးစရာ၊ တောင်းစရာ၊ အံဆွဲဖွင့်ထားစရာမလိုတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့နေနိုင်တဲ့ ဘ၀ရစေချင်ပါတယ်..
အရိုးကိုက်ရင် အသံမြည်တယ် အသားစားတော့ အသံမမြည်ဘူး.. အချီကြီးစားပြီး ငြိမ်မှိန်းနေတဲ့သူတွေ ဒီလိုလူတွေကြ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အားလုံးက ခယလို့…..
အင်း… စနစ်ကြောင့် မဟုတ်ဘူး… ဆိုသူဂျီး :harr:
အဲ့လိုပြောတာပဲ wow ရေ။ စာရေးမလေးကိုမေးကြည့်တော့လေ။ ပွဲစားတွေလုပ်စားကော သူတို့နဲ့ဘာဆိုင် လဲဗျာနော့ … ကာယကံရှင်က သဘောတူလို့ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းလေးရယ် သူ့မှတ်ပုံတင်ရယ်ကိုတောင်ပေး လိုက်သေးတာပဲ။ တစ်လပြည့်လို့ရပြီဆိုရင် ဘယ်နှစောင်ဖြစ်ဖြစ် ထုတ်ပေးသင့်တာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား …
သူရို့ အထက်ကလူအတွက် ကောက်ပေးရင်း ၊ သူရို့ လဲ အစွန်အဖျားလေးစားရင်းပေါ့
တယ်ဟုတ်ပါလား နှစ်ဘာသာနဲ့အောင်တာပဲ။ ကျွန်တော့်ကိုမမှီသေးပါ ကျွန်တော်တို့တုန်းက ကျွန်တော်က သုံးဘာသာနဲ့အောင်တာ Buddhist ဘာသာရယ်၊ Hindi ဘာသာရယ်၊ Christan ဘာသာရယ် ၊ သုံးခုတောင် ဒါတောင်မွတ်စလင်ဘာသာက တစ်ဝက်ခြစ်ချလိုက်လို့ ။
နံပါတ် ၂ ပုံက အ၀ါလေးနဲ့က မမ သူငယ်ချင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုတူနေတယ် …
နယ်ကဖြေပြီး ဂုဏ်ထူး ၂ ဘာသာနဲ့ အောင်တဲ့ ကလေးကို ချီးကျူးပါတယ်နော်…
ကျွန်တော်ရဲ့ နှစ်ဝမ်းကွဲတူလေးပါ။ ရွာ “တွဲဘက်အထက်တန်းကျောင်းခွဲ” အဲ့လိုခေါ်သလားမသိ။ အဲ့ကနေအောင်တာပါ။ နယ်မှာက ပညာရေး၊ ကျမ်းမာရေး အစစချို့တဲ့ပါတယ်။
တို့ နိုင်ငံ ရဲ့ အစိုး ရ ရုံးတွေ မှာ မလို အပ်တဲ့ စည်း မျဉ်း ၊စည်း ကမ်း တွေ နဲ့ လူတွေ ရဲ့ အချိန်တွေ၊ အင်အားတွေ အလဟသ ကုန် စေတယ်။
လ၀က ရုံး တွေ နဲ့ ပတ်သက် ရင် အဆိုးဆုံး ပဲ၊ မှတ်ပုံတင် အပျောက်၊ သန်းခေါင် စာရင်းအပြောင်း ၊ တွေ မှာ မူ လ လုပ်ခဲ့ တဲ့ ရုံး တွေ ကို မဖြစ် မနေ ဘယ်လောက်ဝေးတဲ့ နေရာရောက်နေနေ ပြန် သွား နေရ တယ်။ ဒီ နိုင်ငံ သားတွေ ရဲ့ စာရင်း တွေ ဟာ သူတို့ ဌာန မှာ ထိန်း သိမ်း ထား ပြီး သူတို့ဝန်ကြီး ဌာန တစ်ခုတည်း ဘယ် မြို့ နယ်က ပဲ ပြန် ကြည့် ကြည့် ရ နိုင်တဲ့ အွန်လိုင်း စနစ် ကို ပြောင်း လို့ ရရဲ့ နဲ့ ဂွင် ပျက် မှာ စိုး လို့ မပြောင်း ကြဘူး။ အဲ … ပိုက် ဆံ များ ရလို့ ကတော့ ဘယ် နိုင် ငံ က လာတဲ့ လူ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ် မြို့နယ် မှာဖြစ် ဖြစ် အလွယ်လေး ပဲ။ ပြောရရင် လည်း ဆုံးမှာ မဟုတ်တော့ ဘူး။
ကိုယ် တွေ တုန်း ကတော့ ၁၀ တန်း အောင်လက် မှတ် ကို ဘွဲ့ ရ ပြီး PSC ဖြေခါနီး မှထုတ် ဖြစ်ခဲ့ တယ်။
အခုလို ပစ်ပေါက်လိုက်တဲ့ ခဲလေးတစ်လုံးကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။
အားပေးပါတယ် myanmarcitizen ရေ။